Maxkamadda Ciidamada oo xukun nolol-dhaafin ku riday Nin geystay… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida qeybta 60-aad ee deegaanada Maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta xukun ku ridey Eedeysane Cismaan Ibraahim Cabdi oo ka tirsanaa Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ee ku sugan Magaalada Baydhabo.
Cismaan Ibraahim Cabdi ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu dhawaan si bareer ah Caasimadda KMG ah ee Koonfur Galbeed ugu dilay qof shacab ah, xili uu ku sugnaa suuqa weyn ee Baydhabo.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida qeybta 60 ayaa u fariisatay dhageysiga Dacwada loo heysto eedeysanaha, waxaana goobjoog ka ahaa dhageysiga kiiska Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Maxkamadda.
Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka Gaashaanle sare Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay in Cismaan Ibraahim lagu xakumey dil toogasho, kadib markii ay ku cadaatay dilka uu geystey.
Dhinaca kale Taliyaha qeybta Ciidamada Booliska Gobolka Baay Gaashanle Sare Aamiin Mad Daruur ayaa Digniin u direy Ciidamada Ciidamada Qalabka sida gaar ahaan Ciidamada Booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay qorigooda ka adkaadaan.